WAA MAXAY LAKONOS FAA'IIDO LEH: SIFOOYINKA DAWOOYINKA IYO KA HORTAGGA - SOOSAARKA DALAGGA
Lakonos: isticmaal, faa'iido iyo waxyeelo
Lakonos ama Fitolacca - warshad ornamental ah oo leh qalabka daawada. Homeland lakonos - Waqooyiga Ameerika. Dhammaan dhirta caynkan, qiyaastii 20 nooc, waa sun, marka laga reebo berrito laconosa.
Lacagtu waxa ay ka kooban tahay
Lakonos ee sharaxaad soo bandhigay sida geedka daawo. Dhammaan qaybo ka mid ah dhirta ayaa bogsiinaya guryaha: xididdada, caleemaha iyo berry. Xididdada dhirta waxaa ku jira maaddooyin waxtar leh iyo cusbada macdanta; walaxda ugu qiimaha badan ee geedka loo aqoonsado inuu yahay daaweyn waa alkoolka phytolaccin. Halabuurka ee caleemaha of laconosa sidoo kale waxaa ku jira phytolaccin tiro yar, marka laga reebo waxaa ka mid ah: tannins, flavonoids, saponins, alkaloids, carbohydrates. Halabuurka waxaa lagu buuxiyaa fitamiinada: A, C, B1, B2, B3, B6 iyo PP. Qodobbada waxtarka leh ee ka kooban hal-abuurka waxaa ka muuqda fosfooraska, manganis, naxaas iyo birta.
Wanaajinta sifooyinka of lacunosa
Fitamiin B1, ama thiamine ee qeyb ka mid ah dhirta ayaa lagama maarmaan u ah jirka si looga ilaaliyo saameynta caadooyinka xun xun (sigaar-cabbidda, khamriga), iyo antioxidantani waxay dhaqaajisaa dhaqdhaqaaqa maskaxda. Lakonos wuxuu xoojiyaa nidaamka difaaca, sababtoo ah joogitaanka fitamiin PP ayaa faa'iido u leh dadka ku dhacay wadno-qabad, taageeraya wadnaha wadnaha. Nitrotinic acid, ama fitamiin PP, wuxuu xakameynayaa wuxuuna caawiyaa habdhiska habka dheef-shiid kiimikaadka.
Xakamaynta jilicsan sababtoo ah hantidiisa faa'iido leh ayaa loo adeegsadaa farshaxanka sida walxo cayriin ah daroogooyinka ficilka kala duwan.. Iyadoo ay saldhig u tahay, calool jilciye, anti-bararka, tonic, daawooyinka antimicrobial iyo antirowmatic ayaa la diyaariyaa. Diyaargarowga ka soo caleemaha ee lacunosa caawiyaan la dagaallanka cudurrada maqaarka. Onkologist ayaa kor u qaaday daraasaddan ka kooban dhirta. Dhakhaatiirtu waxay arkeen unugyo aan caadi aheyn oo borotiinka ah oo si xun u saameeya unugyada leukemia.
Iyada oo isticmaalka lacunosa ay la xiriirto tiro badan oo cuntooyin ah ee daawada dhaqameed. Tincture, decoctions iyo daawooyinka kale waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo fungal maqaarka iyo cudurrada viral, oo leh dhibaatooyin ah dabeecada neuralgic, qabow, xanuunka dheeraadka ah iyo cudurada ilkaha.
Ma taqaanaa? Magaca kale lakonosa "Kermes berry" wuxuu ka yimaadaa magaca cayayaanka - Kermes. Casiirka ee dhirta laconosa iyo carmine dabiiciga ah, taas oo laga helo cayayaanka, waa mid isku mid ah midabka. Intaa waxaa dheer, juice sidoo kale waxaa la dhejin karaa dhar - heli a hooska quruxda badan ee burgundy.
Qodobbada waxtarka leh ee juice daacuunka
Dhirta faa'iidada lakonosa ayaa laga helay xitaa gumaystayaashii ugu horreeyay ee America. Casiirka miro ayaa loo isticmaalaa sida looska iyo cadaadiska kansarka maqaarka, barar iyo finan, boogaha maqaarka, barar iyo finan. Caawinta muhiimka ah waxay keentaa casiirka markii la isticmaalo cirib-xumo ba'an. Si aad u samayso casiirka, ku dar berry galay bir ah, tuujin iyo cadaadis iyada oo loo marayo daaha qaro ah ee faashad.
Faleebo ku jira cudurrada xubnaha
Wixii qashin ah, lakabyo iyo cadaadis loogu talagalay xanuunka rheumatic ee kudubyada isku diyaarinaya faleebo biyaha ee caleemaha geedka. Laba qaado oo caleemo la qalajiyey ku shub hal galaas oo biyo nadiifa ah. Ka dhig meel madow laba toddobaad.
Tincture leh laryngitis iyo dhuun xanuun
Tincture Laconosa waxaa loo diyaariyaa asalka geedka. 10 g oo xididka ah (la jajabiyey) 100 ml oo khamri ah (70%).
Waa muhiim! Diyaargarowga, ma aha lagama maarmaan in la qaato aalkolada 90% ee xoogga, maadaama maadooyinka biyaha laysku dhexgeli karo aan soo saarin.
Uma baahna inaad ku adkaysato saddex toddobaad, ka dibna waxaad codsan kartaa dhuunta cunaha ee lugaha, dhuun xanuun (fuuqbax), faranjirada. Daawada rasmiga ah, tincture sida qayb ka mid ah daroogooyinka.
Decoction ah ee berry lakonosa helay helitaanka codsiga hargab iyo cudurada ilkaha. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa hypertension, kiiskan, iska dhaaf waqtiga loo ogolaanayo daroogo iyo aalado leh aalkolo. Wixii diyaarinta waxay u baahan doontaa muggeed oo miro ah (5 g), 250 ml oo biyo ah. Kareemka karkari biyo ah dhowr daqiiqadood, ka dibna ku adkeyso 30 daqiiqo. Iyada oo hypertension, qaado qaado qaado saddex jeer maalintii kahor cuntada, oo leh stomatology ama hargab loo isticmaalo biyo raacinta. Wixii cudurada ugu dambeeyay, waxaad sidoo kale diyaarin kartaa decoction ah ee caleemaha geedka ee saamiga 10 g ee caleemo halkii 250 ml oo biyo ah.
Isticmaalka lacunosa ee guriga ku yaal
Sifooyinka bogsashada ee laconosa waxay heleen jawaab ka mid ah guryaha loo yaqaan 'homeopathy'. Tincture tincture oo loo yaqaan 'Phytolacca', kaas oo laga diyaariyey alaabta ceeriin ee cusub, ayaa lagu tilmaamaa qufac, murgacasho, roodo la'aan, dhuun xanuun, qandho, sciatica, faryngitis. Daawooyinka Homeopathic ee ku saleysan laconosa waxay caadi ahaan u shaqeeyaan nidaamka lymphatic, hawlaha muruqyada iyo waxay leeyihiin saamayn tonic ah oo saameyn ku yeelata jirka.
Xaqiiqo xiiso leh! Qaar ka mid ah wadamada yurub ee koonfureed laconosa waxaa lagu dhajiyaa silsilad iftiin leh, iyo Jarmalka iyo Maraykanka, diyaarinta laconosa waxaa lagu daraa farmashiyaha rasmiga ah ee dalalka.
Ururinta, diyaarinta iyo kaydinta alaabta ceeriin ah ee lakonosa
Sida qalabka daawooyinka qashinka ah waxay ururiyaan dhammaan qaybaha geedka. Caleemaha waxaa la goyn karaa inta lagu jiro xilliga xagaaga, waxay ku qalajanyihiin qol hawo qalalan ama foosto ka dib goosashada. Ka dibna waxay soo qaataan berry iyo caws, ka dibna xididdada. Miraha Laconosa waxay bilaabaan inay dillaacaan bilowga xilliga dayrta, ka dib marka Bisaylka oo dhan ay noqdaan midab madow. Muddadan, xididkii lacunosa wuxuu ku habboon yahay goosashada sidii walxo cayriin ah. Rizbooyinka ku haboon waa inay lahaataa xarun huruud ah, haddii ay casaan tahay, xididka aan ku habbooneyn. Roots waa la dhaqay oo la qalajiyey qalajiyo khaas ah heerkul ah 50 darajo. Miraha waxaa loo isticmaalaa labadaba cusub oo laga tirtiraa, oo la qalajiyey - gudaha gudaha ama qalajiyaha.
Digniin! Waxaa lagula talinayaa inaad xirto gacmo gashi markaad uruurinayso laconosa qashinka si aad u ilaaliso gacmahaaga inaad ka hesho casiirka. Waxay keeni kartaa cuncun ama barar.
Contraindications iyo waxyeello lakonosa
Daaweynta maandooriyeyaasha lakonosa aan lagu qorin bukaanada da'doodu ka yar tahay siddeed iyo toban sano. Haddii ay dhacdo in xaddi badan oo daroogo ah oo ku saleysan laconosa, matag, shuban iyo madax xanuun ayaa suurtagal ah. Ku sumoowga darajada dhexdhexaad ah waxaa weheliya qalal iyo curyaanimo ku-meel-gaadhka ah ee addimada, oo leh sumo daran, dhimasho ka yimaada wadno-qabasho ama caburin. Farshaxanka digirta ayaa ka horjoogsanaya haweenka uurka leh, waxay suurtogal u tahay inay kor u qaadaan codka ilma-galeenka, iyo natiijada, diidmada uur-kujirka. Isticmaalka dibedda ee saameynta daawooyinka lama diiwaangelin, laakiin dulqaad la'aanta qaar ka mid ah walxaha qaarkood qayb ka mid ah warshad waa suurtagal. Dadka xasaasiyadda xannuunsan waa in ay tijaabiyaan daroogada maqaarka ku jira qulqulka suxulka (gudaha) si ay u hubiyaan in aanay xasaasiyad ku lahayn geedka.
Waa maxay lakabka dhirta? Dhirta daawooyinka badankood waxay muujiyaan guryahooda dawooyinka sababta oo ah sunta. Lakonos sidoo kale waa sun, sidaas darteed is-daaweyntu waa wax aad u daran oo leh cawaaqib aan laga bogsan karin. La tasho dhakhtar intaadan qaadan daawada.